बल्ल झुक्यो एनसेल : साढे २२ अर्ब लाभ कर तिर्न सुरु गर्यो यस्तो तयारी ! -
बल्ल झुक्यो एनसेल : साढे २२ अर्ब लाभ कर तिर्न सुरु गर्यो यस्तो तयारी !
काठमाडौ । बहुप्रतिष्ठित कम्पनी एनसेल बल्ल नेपालसँग झुकेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निर्धारण भएको कर भुक्तानी गर्न एनसेल प्रालिले तयारी थालेसँगै अब भने कर उठ्ने संकेत देखिएको छ । कर तिर्नका लागि आफ्नो निक्षेप रहेका बैंकहरूसँग पैसा माग गरेपछि यो तयारी खुल्न आएको हो ।